Tababaraha Arsenal ee Unai Emery oo doortay SHANTA ciyaaryahan ee adduunka ugu fiican – Gool FM
Tababaraha Arsenal ee Unai Emery oo doortay SHANTA ciyaaryahan ee adduunka ugu fiican
(London) 29 Maajo 2019. Macalinka reer Spain iyo kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa ka hadlay kulanka finalka UEFA Europa League ay caawa kula ciyaari doonaan dhigooda Chelsea.
Unai Emery ayaa qiray sida ay u adag tahay ciyaartan, iyo shaqada adag ee sugeysa kooxdiisa si ay ugu guuleysato koobka UEFA Europa League, isla markaana ay u xaqiijiyaan ka qeyb galkooda tartanka Champions League xili ciyaareedka soo socda.
Dhinaca kale macalinka reer Spain ayaa wuxuu tilmaamay in kooxdiisa Arsenal ay caawa wajihi doonto mid ka mid ah shanta ciyaaryahan ee ugu fiican adduunka, kaasoo ah laacibka reer Belgian ee Eden Hazard.
Unai Emery ayaa soo bandhigay aragtidiisa kaga aadan liis ka kooban 5 ciyaaryahan uu ku tilmaamay inay yihiin ciyaartoyda xiligan ugu fiican kubadda cagta aduunka, kuwaasoo kala ah Lionel Messi, Neymar Jr, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard iyo Maxamed Saalax.
“Eden Hazard waa ciyaaryahan muhiim ah ee xili kasta ciyaarta go’aamin kara, sidaasi darteed waa inaan ka fogaanaa inta aan awoodno halis kasta ee nooga imaan karta, Chelsea waxay awood u leedahay inay badiso, sababa la xiriira Hazard”.
“Tilmaamahan iyo awoodan waxaan ku arkay kaliya, xiddigaha Messi, Neymar, Ronaldo, Hazard iyo Saalax”.
“Wey wada imaan karaan xiddigaha Neymar Jr iyo Kylian Mbappé kooxda Real Madrid”